စာသင်သံဃာများအား သြဝါဒပေး – ၀ီရသူ
နတ်တော်လဆန်း(၇)၇က် (၁၄.၁၂.၂၀၁၈) နေ့ ည (၇း၀၀) နာရီ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ ဝိဇာတ ဗိမာန် ကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်ရှိပါတယ်။ တရားပွဲမတိုင်ခင် ဝင်နားတာပါ။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်လေး ဦးကုဏ္ဍလက မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ကျောင်းသားဟောင်းလည်းဖြစ် အင်းစိန်ရွာ မ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တပည့်ရင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အင်းစိန်ရွာမ ကျောင်းတိုက်ကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီး ဦးနန္ဒဝံသရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိမှာ ကျောင်း တည်တာဖြစ်လို့ ကျောင်းတိုက်နာမည်ကို ဝိဇာတဗိမာန် ဟု အမည် ပေးထားတာပါ။
စာချဆရာတော်လေး အရှင်နာဂိန္ဒာလင်္ကာရက မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှာ ဓမ္မစရိယ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး စာရေးသူရဲ့ နဂါးနီစုဘူးအသင်းမှာလည်း နာယကဆရာတော်လုပ်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် စာသင်သားလေးများကို သြဝါဒပေးဖို့ လျှောက်ထားသဖြင့် တပည့်သုံးမျိုးအ ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ချစ်တပည့် နှစ်တပည့် ပစ်တပည့် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တပည့်သုံးမျိုး ဆောင်းပါးကို ပူတွဲ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
“ချစ်စရာ တပည့် ပစ်စရာ တပည့်”
စာသင်သားလောက စာသင်သံဃာတို့တွင် တွေ့ကြုံရလေ့ရှိသော စာသင်သားများ အနက် ချစ်ရာကောင်း သူ၊ နှစ်စရာကောင်းသူ ပစ်စရာကောင်းသူများကား နေရာမလွဲ ရှိတတ်ကြပေသည်။ ချစ်စရာကောင်းသူကလည်း အသွင်မျိုးမျိုး ရှိလေသည်. စာကြိုးစားသောကြောင့် ချစ်စရာကောင်းသူ၊ စာတော်ကြောင့် ချစ်ရာကောင်းသူ၊ ထူချွန် ထက်မြက်သောကြောင့်၊ အနေထိုင်ကောင်းသောကြောင့်၊ လိမ္မာသောကြောင့် ချစ်စရာကောင်းသူ စသည်ဖြင့် များစွာ ရှိလေသည်။ ထိုသူတို့သည် ဆရာကောင်းတပည့်များ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဝါသနာပါသူဖြစ်သောကြောင့်၊ ပါရမီရှင် ဖြစ်သောကြောင့် အစရှိသည်ဖြင့် လိမ္မာရည်မွန်ရခြင်း၊ ထူးချွန်ထက်မြက်ရခြင်းတို့၏ အကြောင်းများစွာ ရှိကြပြန်လေ သည်။ ဝါသနာမပါ၊ ပါရမီရှိမဟုတ်၊ ဆရာသမားကောင်းနှင့် မတွေ့ခဲ့သော်လည်း ရည်မှန်းချက်ကြီးမားခြင်းကြောင့် ကြိုးစားအားထုတ်ရာမှာ အားလုံးပြည့်စုံသည့် ချစ်ရာတပည့်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သူများကိုလည်း တွေ့ရပေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ စာသင်များအတွက် ချစ်စရာကောင်းသော တပည့်ကြီးငယ် အမြဲတစေ ရှိနေသည်သာ ဖြစ်လေ၏။
နှစ်စရာကောင်းသူကလည်း အမျိုးမျိုးရှိသည်၊ များသောအားဖြင့် ပညာရေးမှာ မထူးချွန်သူများ ဖြစ်လေ၏။ သံဃာဝေယျာဝစ္စမြဲသောကြောင့် နှစ်သက်မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသူ၊ ဆရာ့ဝေယျာဝစ္စမြဲသောကြောင့် နှစ်သက်မြတ် နိုးဖွယ်ကောင်းသူ၊ စိတ်ထားကြောင်းသောကြောင့်၊ အကျင့်ကောင်းသောကြောင့်၊ သဘောထားကြီးသောကြောင့် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသူဟူ၍ အကြောင်းတရားများကား များပြားလှသည်။ ထိုသူတို့ကို စာသင်များကလည်း ချစ်ကြ၏။ ဆရာများကလည်း ချစ်ကြ၏။ သိက္ခာနှင့်ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြူစင်သောကြောင့် ချစ်မြတ်နိုးကြခြင်း ဖြစ်၏။ သို့သော် ထိုသူတို့သည် နေရာရသူများမဟုတ်ကြပါ။ ပထမဦးစားပေး အချစ်ခံရသူများ မဟုတ်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် ချစ်စရာကောင်းပါလျက် နှစ်သက်မြတ်နိုးစရာကောင်းသော (နှစ်စရာကောင်းသော) အမျိုးအစားတွင် ထည့်သွင်း လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ထို့အတူပင် ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျောင်းတိုက် ဝေယျာဝစ္စ၊ သံဃာ့ဝေယျာဝစ္စ၊ ဆရာ့ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ငန်း၌ ဘဝကို နှစ်မြှုပ်ထားသူများ ဖြစ်ကြ၏။ ပညာရေး အဆုံးရှုံးခံပြီး၊ ဘဝကို စေတပြီး အနစ်နာခံ သူများ ဖြစ်ကြ ၏။ ဒကာ ဒကာမများက အားကိုးကြသော်လည်း ဒကာ ဒကာမများ၏ အထင်ကြီးမှု အရေးစိုက်မှု အလေးနက် ထား၍ ကြည်ညိုမှုများကို ခံယူခွင့်ရရှိသူများ မဟုတ်ကြပေ။ များသောအားဖြင့် သဘောကောင်းလိုက် တာဟယ် သနားစရာပါအေ နှစ်မြောစရာပါကွာ စသည်ဖြင့် သနားချစ်ဖြင့်သာ အချစ်ခံရသူများ ဖြစ်လေသည်။ ထို တပည့်များက ဆရာ့အပေါ် ကျေးဇူးကြီးသော ပါရမီဖြည့်ဖက် တပည့်ကြီးများ အဖြည့်ခံ တပည့်ကြီးများ ဖြစ်လေ သတည်း။
ပစ်စရာတပည့်များကလည်း များစွာရှိ၏။ စာမကြိုစားသောကြောင့်၊ စာစိတ်မဝင်စားသောကြောင့် စာမလို ချင်သောကြောင့် ပစ်စရာကောင်းသူ၊ အကျင့်မကောင်းကြောင့်၊ အများနှင့် သဟဇာတမဖြစ်သောကြောင့်၊ ဆိုးမိုက် ပေတေသောကြောင့် ပစ်စရာကောင်းသူ၊ ကျေးဇူးကန်းသောကြောင့်၊ ကျေးစွပ်သောကြောင့် ပစ်စရာကောင်းသူ စသည်ဖြင့် စုံလင်လှပေသည်။ ထိုသူတို့သည် မိမိဘဝလည်း အကျိုးမရှိ၊ သူတပါးဘဝလည်း အကျိုးမရှိ၊ လောက ကောင်းကျိုးမပြုသည့် အန္တရာယ်သမားဖြစ်လေသည်။ ၄င်းကို မြတ်စွာဘုရားက ဆဝါလာတ(ထင်းကုလားတုံး) များအဖြင့် ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့လေသည်။ သုသာန်၌ သူသေကောင်ကို မီးသင်္ဂြီုဟ်၍ ကျန်ရှိနေသော ထင်းစရာလေး၌ အနားနှစ်ဖက်က မီးစွဲလောင်ထား၏ အစွန်းနှစ်ဖက်၏ အလယ်၌ မစင်အညစ်အကြေး ပေကျံနေ၏။ အိမ်ဆောက်ရာ ၌လည်း အသုံးမဝင်၊ ယုတ်စွအဆုံး ထင်းစိုက်ရာ၌ပင် အလုပ်မဖြစ်၊ ထိမိလျှင် မစင်ပေမည်၊ အပူလောင်မည်၊ ထင်းစိုက်လျှင် မစင်စော်နံမည်၊ မည်သည့်နေရာမှာမျှ အသုံးမဝင်သည့်အပြင် အဆိပ်အတောက် အနှောက်အယှက် ပင် ပေးစွမ်းနိုင်သည့် ထင်းကုလားတုံးကို ဆိုလိုပေသည်။ ပစ်စရာကောင်းသော တပည့်များက ထင်းကုလားတုံး လူသားများပင်ဖြစ်လေသည်။ ဘုရားလက်ထက်ကလည်း ရှိ၏။ ယခင်လည်းရှိ၏။ ယခုလည်း ရှိ၏။ အဖျက်စွမ်းအား ကြီးလျှင် ကြီးသည့်အလျောက် အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့် ပြဿနာသမားများ ဖြစ်လေ၏။
အို……စာသင်သား၊ သင်သည် အဘယ်တပည့် အမျိုးအစား ဖြစ်လေသနည်း။ ယခုအခါ သင်ခိုလှုံရာ မိုးကုတ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကြီးသည် သင့်အား ကျေးဇူးကြီးလှ၏။ သင်၏ဆရာ မိုကုတ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော်သည်လည်း သင့်အပေါ် ဆရာ့ကျင်ဝတ် ကျေပွန်လှ၏။ သင့်ရင်ထဲ၌ အကျင့်ဆိုး ဥာဉ်ဆိုးများ ရှိလျှင် ဖောက်ထုတ်ပစ်လိုက်လေတော့။ သင့်ကို သင့်ဆရာကလည်း ထင်းကု လားတုံးဘဝ မတွေ့မမြင်စေလိုပေ။ သင့်ကို ဘုရားသာသနာ တော်ကလည်း ထင်းကုလားတုံးအဖြစ် လက်ခံထား လိုခြင်း မရှိပေ။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း သံသရာခရီးမှာ ငရဲမီးအဖြစ်မှတပါး ရွေးချယ်စရာ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် ပစ်စရာကောင်းသော တပည့်ဘဝကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါလေ…….။ နှစ်စရာကောင်းသော တပည့်အဖြစ် စာသင်သား တိုင်း ချစ်စရာတပည့်လေများ ဖြစ်နိုင်ပါစေ…..။
နတျတျောလဆနျး(၇)၇ကျ (၁၄.၁၂.၂၀၁၈) နေ့ ည (ရး၀၀) နာရီ ရနျကုနျ လှိုငျသာယာ ဝိဇာတ ဗိမာနျ ကြောငျးတိုကျသို့ ရောကျရှိပါတယျ။ တရားပှဲမတိုငျခငျ ဝငျနားတာပါ။ာငျးထိုငျဆရာတျောလေး ဦးကုဏ်ဍလက မစိုးရိမျတိုကျသဈ ကြောငျးသားဟောငျးလညျးဖွဈ အငျးစိနျရှာ မ ဆရာတျောကွီးရဲ့ တပညျ့ရငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။
အငျးစိနျရှာမ ကြောငျးတိုကျကွီးကို တညျထောငျခဲ့တဲ့ ဆရာတျောကွီး ဦးနန်ဒဝံသရဲ့ မှေးရပျဇာတိမှာ ကြောငျး တညျတာဖွဈလို့ ကြောငျးတိုကျနာမညျကို ဝိဇာတဗိမာနျ ဟု အမညျ ပေးထားတာပါ။
စာခဆြရာတျောလေး အရှငျနာဂိန်ဒာလင်ျကာရက မစိုးရိမျတိုကျသဈမှာ ဓမ်မစရိယ ဘှဲ့ရရှိခဲ့ပွီး စာရေးသူရဲ့ နဂါးနီစုဘူးအသငျးမှာလညျး နာယကဆရာတျောလုပျခဲ့ ပါသေးတယျ။ ရောကျတုနျးရောကျခိုကျ စာသငျသားလေးမြားကို သွဝါဒပေးဖို့ လြှောကျထားသဖွငျ့ တပညျ့သုံးမြိုးအ ကွောငျး ဟောကွားခဲ့ပါတယျ။ ခဈြတပညျ့ နှဈတပညျ့ ပဈတပညျ့ တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ တပညျ့သုံးမြိုး ဆောငျးပါးကို ပူတှဲ တငျပွလိုကျပါတယျ။
“ခဈြစရာ တပညျ့ ပဈစရာ တပညျ့”
စာသငျသားလောက စာသငျသံဃာတို့တှငျ တှကွေုံ့ရလရှေိ့သော စာသငျသားမြား အနကျ ခဈြရာကောငျး သူ၊ နှဈစရာကောငျးသူ ပဈစရာကောငျးသူမြားကား နရောမလှဲ ရှိတတျကွပသေညျ။ ခဈြစရာကောငျးသူကလညျး အသှငျမြိုးမြိုး ရှိလသေညျ. စာကွိုးစားသောကွောငျ့ ခဈြစရာကောငျးသူ၊ စာတျောကွောငျ့ ခဈြရာကောငျးသူ၊ ထူခြှနျ ထကျမွကျသောကွောငျ့၊ အနထေိုငျကောငျးသောကွောငျ့၊ လိမ်မာသောကွောငျ့ ခဈြစရာကောငျးသူ စသညျဖွငျ့ မြားစှာ ရှိလသေညျ။ ထိုသူတို့သညျ ဆရာကောငျးတပညျ့မြား ဖွဈသောကွောငျ့၊ ဝါသနာပါသူဖွဈသောကွောငျ့၊ ပါရမီရှငျ ဖွဈသောကွောငျ့ အစရှိသညျဖွငျ့ လိမ်မာရညျမှနျရခွငျး၊ ထူးခြှနျထကျမွကျရခွငျးတို့၏ အကွောငျးမြားစှာ ရှိကွပွနျလေ သညျ။ ဝါသနာမပါ၊ ပါရမီရှိမဟုတျ၊ ဆရာသမားကောငျးနှငျ့ မတှခေဲ့သျောလညျး ရညျမှနျးခကျြကွီးမားခွငျးကွောငျ့ ကွိုးစားအားထုတျရာမှာ အားလုံးပွညျ့စုံသညျ့ ခဈြရာတပညျ့အဖွဈသို့ ရောကျရှိခဲ့သူမြားကိုလညျး တှရေ့ပသေညျ။ မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ စာသငျမြားအတှကျ ခဈြစရာကောငျးသော တပညျ့ကွီးငယျ အမွဲတစေ ရှိနသေညျသာ ဖွဈလေ၏။
နှဈစရာကောငျးသူကလညျး အမြိုးမြိုးရှိသညျ၊ မြားသောအားဖွငျ့ ပညာရေးမှာ မထူးခြှနျသူမြား ဖွဈလေ၏။ သံဃာဝယြောဝစ်စမွဲသောကွောငျ့ နှဈသကျမွတျနိုးဖှယျကောငျးသူ၊ ဆရာ့ဝယြောဝစ်စမွဲသောကွောငျ့ နှဈသကျမွတျ နိုးဖှယျကောငျးသူ၊ စိတျထားကွောငျးသောကွောငျ့၊ အကငျြ့ကောငျးသောကွောငျ့၊ သဘောထားကွီးသောကွောငျ့ နှဈလိုဖှယျကောငျးသူဟူ၍ အကွောငျးတရားမြားကား မြားပွားလှသညျ။ ထိုသူတို့ကို စာသငျမြားကလညျး ခဈြကွ၏။ ဆရာမြားကလညျး ခဈြကွ၏။ သိက်ခာနှငျ့ကငျြ့ဝတျပိုငျးဆိုငျရာ ဖွူစငျသောကွောငျ့ ခဈြမွတျနိုးကွခွငျး ဖွဈ၏။ သို့သျော ထိုသူတို့သညျ နရောရသူမြားမဟုတျကွပါ။ ပထမဦးစားပေး အခဈြခံရသူမြား မဟုတျကွပါ။ ထို့ကွောငျ့ ခဈြစရာကောငျးပါလကျြ နှဈသကျမွတျနိုးစရာကောငျးသော (နှဈစရာကောငျးသော) အမြိုးအစားတှငျ ထညျ့သှငျး လိုကျရခွငျးဖွဈပသေညျ။
ထို့အတူပငျ ၎င်းငျးတို့ကိုယျတိုငျကလညျး ကြောငျးတိုကျ ဝယြောဝစ်စ၊ သံဃာ့ဝယြောဝစ်စ၊ ဆရာ့ဝယြောဝစ်စ လုပျငနျး၌ ဘဝကို နှဈမွှုပျထားသူမြား ဖွဈကွ၏။ ပညာရေး အဆုံးရှုံးခံပွီး၊ ဘဝကို စတေပွီး အနဈနာခံ သူမြား ဖွဈကွ ၏။ ဒကာ ဒကာမမြားက အားကိုးကွသျောလညျး ဒကာ ဒကာမမြား၏ အထငျကွီးမှု အရေးစိုကျမှု အလေးနကျ ထား၍ ကွညျညိုမှုမြားကို ခံယူခှငျ့ရရှိသူမြား မဟုတျကွပေ။ မြားသောအားဖွငျ့ သဘောကောငျးလိုကျ တာဟယျ သနားစရာပါအေ နှဈမွောစရာပါကှာ စသညျဖွငျ့ သနားခဈြဖွငျ့သာ အခဈြခံရသူမြား ဖွဈလသေညျ။ ထို တပညျ့မြားက ဆရာ့အပျေါ ကြေးဇူးကွီးသော ပါရမီဖွညျ့ဖကျ တပညျ့ကွီးမြား အဖွညျ့ခံ တပညျ့ကွီးမြား ဖွဈလေ သတညျး။
ပဈစရာတပညျ့မြားကလညျး မြားစှာရှိ၏။ စာမကွိုစားသောကွောငျ့၊ စာစိတျမဝငျစားသောကွောငျ့ စာမလို ခငျြသောကွောငျ့ ပဈစရာကောငျးသူ၊ အကငျြ့မကောငျးကွောငျ့၊ အမြားနှငျ့ သဟဇာတမဖွဈသောကွောငျ့၊ ဆိုးမိုကျ ပတေသေောကွောငျ့ ပဈစရာကောငျးသူ၊ ကြေးဇူးကနျးသောကွောငျ့၊ ကြေးစှပျသောကွောငျ့ ပဈစရာကောငျးသူ စသညျဖွငျ့ စုံလငျလှပသေညျ။ ထိုသူတို့သညျ မိမိဘဝလညျး အကြိုးမရှိ၊ သူတပါးဘဝလညျး အကြိုးမရှိ၊ လောက ကောငျးကြိုးမပွုသညျ့ အန်တရာယျသမားဖွဈလသေညျ။ ၎င်းငျးကို မွတျစှာဘုရားက ဆဝါလာတ(ထငျးကုလားတုံး) မြားအဖွငျ့ ပွဈတငျရှုတျခခြဲ့လသေညျ။ သုသာနျ၌ သူသကေောငျကို မီးသွင်ျဂီုဟျ၍ ကနျြရှိနသေော ထငျးစရာလေး၌ အနားနှဈဖကျက မီးစှဲလောငျထား၏ အစှနျးနှဈဖကျ၏ အလယျ၌ မစငျအညဈအကွေး ပကြေံနေ၏။ အိမျဆောကျရာ ၌လညျး အသုံးမဝငျ၊ ယုတျစှအဆုံး ထငျးစိုကျရာ၌ပငျ အလုပျမဖွဈ၊ ထိမိလြှငျ မစငျပမေညျ၊ အပူလောငျမညျ၊ ထငျးစိုကျလြှငျ မစငျစျောနံမညျ၊ မညျသညျ့နရောမှာမြှ အသုံးမဝငျသညျ့အပွငျ အဆိပျအတောကျ အနှောကျအယှကျ ပငျ ပေးစှမျးနိုငျသညျ့ ထငျးကုလားတုံးကို ဆိုလိုပသေညျ။ ပဈစရာကောငျးသော တပညျ့မြားက ထငျးကုလားတုံး လူသားမြားပငျဖွဈလသေညျ။ ဘုရားလကျထကျကလညျး ရှိ၏။ ယခငျလညျးရှိ၏။ ယခုလညျး ရှိ၏။ အဖကျြစှမျးအား ကွီးလြှငျ ကွီးသညျ့အလြောကျ အန်တရာယျပေးနိုငျသညျ့ ပွဿနာသမားမြား ဖွဈလေ၏။
အို……စာသငျသား၊ သငျသညျ အဘယျတပညျ့ အမြိုးအစား ဖွဈလသေနညျး။ ယခုအခါ သငျခိုလှုံရာ မိုးကုတျ မစိုးရိမျတိုကျသဈကွီးသညျ သငျ့အား ကြေးဇူးကွီးလှ၏။ သငျ၏ဆရာ မိုကုတျ မစိုးရိမျတိုကျသဈ ဆရာတျောသညျလညျး သငျ့အပျေါ ဆရာ့ကငျြဝတျ ကပြှေနျလှ၏။ သငျ့ရငျထဲ၌ အကငျြ့ဆိုး ဉာဉျဆိုးမြား ရှိလြှငျ ဖောကျထုတျပဈလိုကျလတေော့။ သငျ့ကို သငျ့ဆရာကလညျး ထငျးကု လားတုံးဘဝ မတှမေ့မွငျစလေိုပေ။ သငျ့ကို ဘုရားသာသနာ တျောကလညျး ထငျးကုလားတုံးအဖွဈ လကျခံထား လိုခွငျး မရှိပေ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး သံသရာခရီးမှာ ငရဲမီးအဖွဈမှတပါး ရှေးခယျြစရာ ရှိမညျမဟုတျပေ။ ထိုကွောငျ့ ပဈစရာကောငျးသော တပညျ့ဘဝကို စှနျ့လှတျလိုကျပါလေ…….။ နှဈစရာကောငျးသော တပညျ့အဖွဈ စာသငျသား တိုငျး ခဈြစရာတပညျ့လမြေား ဖွဈနိုငျပါစေ…..။
မုဒိတာရပ်ဝန်း (မန်းမဟော်သဓာ အလှူတော်)အမှတ်စဉ်-၂၃၄
မုဒိတာရပ်ဝန်း (မန်းမဟော်သဓာ အလှူတော်)အမှတ်စဉ်-၂၅၄